पत्‍नीका सात प्रकार; तपाईँ/तपाईँकी पत्‍नी कस्ती ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अनिश्चितकालीन बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै लिम्बुवानद्वारा पाँच गाडी तोडफोड
UAE Exchange Transact and Win Contest 2013 “2nd Monthly Draw Winners” →
तपाईँलाई थाहा छ पत्‍नी कति किसिमका हुन्छन्? बौद्ध ग्रन्थमा पत्‍नीका प्रकार ’bout एउटा रमाइलो वर्णन भेटियो। भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका पत्‍नीहरुको ’boutमा बयान गरेका हुन्। कुरा गौतम बुद्धले धर्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो। त्यस कालमा अनाथपिण्डिक नामका एक व्यक्ति थिए। उनी आफै, उनका छोरा र दुई छोरी साह्रै धर्मात्मा थिए। उनले आफ्ना छोराको बिहे सुजाता नामकी एक युवतीसँग गरिदिएका थिए। सुजाताको स्वभाव भने विपरीत। एक पटक भगवान अनाथपिण्डिकको घरमा जाँदा कोलाहल मच्चिरहेको रहेछ। कारण सोध्दा अनाथपिण्डिकले भगवानलाई सबै बताइदिए। त्यसपछि भगवानले सुजातालाई बोलाई सात प्रकारका पत्‍नी ’bout उपदेश दिएका रहेछन्। सात प्रकार यस्तो छ-
यी त भए बुद्धकालीन समाजमा पत्‍नीका प्रकार। आधुनिक युगमा पत्‍नीका प्रकारमा केही थप्नु पर्ने पनि पो देख्नुभयो कि ?